Echefukwala discuss The Australian National University
The Australian National University (Anu) na-a mba nnyocha mahadum dị na Canberra, isi obodo nke Australia. Ya isi campus na Acton agụnye asaa ezi ihe ma na research kọleji, na mgbakwunye na ọtụtụ mba academies na institutes.
hiwere na 1946, Ọ bụ nanị mahadum na e kere site nzuko omeiwu nke Australia. Mbụ a Postgraduate nnyocha mahadum, Anu bidoro Undergraduate ozizi na 1960 mgbe ọ na-ike na Canberra University College, nke e guzobere na 1929 as a campus of the University of Melbourne. ANU enrolls 10,052 Undergraduate na 10,840 Postgraduate ụmụ akwụkwọ na ndị mîdaha 3,753 mkpara. The university’s endowment stood at A$1.13 billion in 2012.
Anu na-anọgide họọrọ n'etiti ụwa si n'elu mahadum. Anu a na-họọrọ harakwa nhata 19 na ụwa (akpa ke Australia) na Eze College London site 2015/16 QS World University Rankings, and 52nd in the world (nke abụọ na Australia) site 2015/16 Times Higher Education. ANU was named the world’s 25th (akpa ke Australia) kasị mba mahadum na a 2016 nnyocha Times Higher Education. na 2015 Times Higher Education Global Employability University ọkwa, -eme kwa afọ ranking nke akwụkwọ na mahadum’ employability, Anu e họọrọ 32nd na ụwa (akpa ke Australia). ANU is ranked 89th (akpa ke Australia) na 2015 CWTS Leiden ranking. ANU is ranked first in the 4 Palmes Atiya na Eduniversal ọkwa.
Anu mkpa isii Nobel Laureates n'etiti ya ngalaba na Alumni. The mahadum eziwo abụọ praịm minista, 30 ugbu a Australian Nnọchiteanya na ihe karịrị iri na abuo ugbu a isi nke Government ngalaba nke Australia. Ụmụ akwụkwọ na-abanye Anu na 2013 had a median Australian Tertiary Admission Rank of 93, the equal-highest among Australian universities.
ANU College of Engineering & Kọmputa sayensị
na February 2013, financial entrepreneur and ANU graduate Graham Tuckwell made the largest university donation in Australian history by giving $50 million to fund an undergraduate scholarship program at ANU.
ANU is well known for its history of student activism and, n'afọ adịbeghị anya, its fossil fuel divestment campaign, which is one of the longest-running and most successful in the country. The decision of the ANU Council to divest from two fossil fuel companies in 2014 was criticised by ministers in the Abbott government, but defended by Vice Chancellor Ian Young, who noted:
dị ka nke 2014 ANU still had investments in major fossil fuel companies.
Ị chọrọ discuss The Australian National University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: The Australian National University ukara Facebook
University nke Sunshine Coast Sippy Downs